Herisetra :: Zandary iray voasambotra rehefa nandratra olona • AoRaha
Herisetra Zandary iray voasambotra rehefa nandratra olona
Tsy nisy alaharo fa nosamborina avy hatrany ny zandary kilasy faharoa iray miasa ao amin’ny tobim-paritry ny Zandarimaria any Andriba, tamin’ny 3 septambra lasa teo. Voalaza fa nanao herisetra tamin’olona nandritra ny alim-pandihizana tany an-toerana io mpitandro filaminana io. Voatazona any amin’ny tobin’ny zandarimaria any Maevatanàna izy atao famotorana.
“Nively vodi-basy ny lehilahy iray io zandary io tao anatin’ny alim-pandihizana tany Mahatsinjo-Mampikony. Naratra ilay lehilahy 30 taona. Ahiana ho mamo vokatry ny fisotroan-toaka ilay zandary tamin’io fotoana io. Nosamborina izy dia notazomina vonjimaika tao amin’ny tobim-paritry ny zandarimaria any Mampikony. Nentina any Maevatanàna izy taorian’izay hatao famotorana”, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny zandarimaria.
Noraisin’ny kaomandin’ny Vondron-tobim-paritry ny Zandarimaria any Maevatanàna ny lany rehetra tamin’ny fitsaboana an’ilay lehilahy naratra mafy, araka ny loharanom-baovao. Efa mihatsara ny fahasalamany.
Fanatanjahantena sy fandraharahana Mampirisika ny tanora hamorona tetikasa ny masoivoho frantsay
Vokatra mozika Namoaka hira vaovao mampandihy ry Kriste
Tra-boina teny Ampamarinana :: Nihena tsikelikely ireo fianakaviana napetraka tetsy amin’ny Seba Isotry
Fandriampahalemana :: Hiofo ho toeram-panofanana mpanao vy very ny ainy ny toby any Ambatolampy